How to Download High Quality FLAC Music for Free | Gadget nhau
Nhasi zvakaoma kururamisa kurodha mumhanzi pamusoro peinternet, izvozvi zvese zvapihwa kwatiri kuburikidza nekumhanyisa pasina kuwedzerwa kurodha pasi kana kudiwa kwenzvimbo pane edu zvishandiso. Asi ko kana izvo zvatiri kutsvaga zviri zvemhando yepamusoro? Zvakanaka chaizvo hapana kudhiza kunyorera kunogona kutipa iyo yepamusoro yemhando yepamusoro yatiri kutsvaga kana isu tichida kuyedza ruzha system kana isu tichida kuishandisa pazviyero zvakakwirira. Muchidimbu izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti mimhanzi kubva kunyorera seSpotify kana Apple Music yakamanikidzwa kushandisa bhatiri shoma uye dhata pane yedu mwero.
Pakati pemafomati anonyanya kushandiswa kuyedza michina yekurira kana yezviitiko ndeye «FLAC». Fomati iri pasina mubvunzo yakawanda isinganyanyo kuzivikanwa pane MP3, asi yakakura kwazvo muhunhu mhando, kusvika padanho rekuti mushure mekuteerera mimhanzi yeFLAC, tichaita kunge tine nzeve dzine tsvina patinoteerera MP3 zvakare. Pano tichaenda kududziro yekuti FLAC mimhanzi ndeyei uye nenzvimbo kwaunogona kurodha mimhanzi mune yakasarudzika fomati.
1 Chii chinonzi FLAC mimhanzi?
2 Kwatinofanira kuteerera mimhanzi yeFLAC
3 Maitiro ekurodha pasi mimhanzi yeFLAC
3.6 Vadivelu Comedy HDTracks
Chii chinonzi FLAC mimhanzi?
FLAC ndicho chidimbu cheMahara Lossless Audio Codec, odhiyo Codec inogadzira odhiyo yedhijitari yakadzvanywa pasina kurasikirwa. Iyo faira inogona kudzikiswa kusvika ku50% yehukuru hwayo pasina kudzikisira hunhu hwayo zvachose. Kunyangwe inogona kunge isinganzwike senge iwe, iri fomati yanga iriko kwemakore mazhinji uye yaive chirongwa chakagadziridzwa neyemugadziri anonzi Josh Colson.
Iyo Xiph.org hwaro uye chirongwa cheFLAC chaive mukutungamira kwekubatanidza iyi nyowani yekumanikidza Codec, iyo imwecheteyo inotarisira mamwe macompresser akadai seIcecast, Vorbis kana Theora pakati pevamwe. PaMay 26, 2013 La Luz yakaona vhezheni 1.3.0 yeFlac.
Kana isu tiri kutsvaga kuchengeta nekuchengetedza edu emimhanzi mafaera padhijitari fomati, iyi fomati pasina mubvunzo ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Chinhu chakanakisa ndechekuti yakasununguka uye kodhi yayo ndeye mahara, saka inogona kuitiswa kune chero Hardware uye Software.
Kwatinofanira kuteerera mimhanzi yeFLAC
Kuteerera kune chero mhando refaira reodhiyo kunoda software inoenderana, kunyangwe vazhinji vacho vachigona kutamba iyi Codec. Tichaita sarudzo yemapurogiramu kuti iwe unakirwe neyakanakisa odhiyo chero nguva.
Iyo yakapusa uye yakapusa-kushandisa-player, inoshandisa mashoma zviwanikwa kubva kune komputa yedu, inoona ese maodhiyo faira aripo uye kuti awanikwe. Inosanganisira akati wandei ekumisikidza maparamende kuti uigadzirise kune zvatinoda, inosanganisira tag tag uye inoshandura faira Inotsigira internet maredhiyo. Isuwo tinavo inowanikwa ye iPhone kana Android.
Mukugadziri: Artem Izmaylov
Nekure inonyanya kufarirwa, VLC yakavhurika sosi yevhidhiyo uye odhiyo mutambi uye fomati. Inoenderana neanenge ese mafomati multimedia mafomati. Iyo inokwanisa kubereka zvinhu zvecodec pasina kutora mamwe mapakeji. Izvo zvinotipawo isu kugona kutamba multimedia mafaera akachengetwa mune yeanomira fomati, senge MaDVD kana Bluray mune zvisarudzo zvinotangira kubva ku480p kusvika 4K. Inowanikwa kune ese ari maviri macOS y Windows kana iPhone y Android.
VLC ye Android
Yakavharwa sosi inoridza iyo yemahara zvachose. Icho chinotarisisa mutambi wevashandisi avo vakajaira kukwikwidzana neraibhurari yavo yedhijitari odhiyo, sezvo iine nhamba huru yesarudzo yatinogona kupotsa. Iyo inogona kuve yakanaka MacOS imwe nzira kune iTunes pamwe neWindows. Iyo inosimbisa hapana mubvunzo kuti iyo yekugadzirisa, irowo ndeimwe yevatambi vakareruka vatinogona kuwana mahara. Iyo ine vhezheni ye MacOS, Windows uye nharembozha dze iPhone o Android.
Kana iwe uchifarira, unogona kuedza Amazon Music Unlimited mazuva makumi matatu mahara nenziyo dzinopfuura mamirioni makumi manomwe
Maitiro ekurodha pasi mimhanzi yeFLAC
Tichaenda tichiona sarudzo dzinovimbika dzewebhusaiti kwadzinga kurodha mimhanzi yedu muFLAC fomati, kana yatora pasi tinogona kuinakidzwa mune chero vatambi vataurwa pamusoro
Iyi online portal iri pachena yakatsaurirwa kurodha mumhanzi zvemukati muFLAC fomati. Iine zvisingaverengeki discographies ezvese marudzi uye eras. Asi chakanakisa chinhu nezve ino webhu portal hapana mubvunzo kuti ihwo hune mhando yemhando yezvinhu zvese, iyo iwe yaunako kuravira kwaunayo, zvinenge zviri chokwadi kuti iwe uchawana izvo zvauri kutsvaga uye zvemhando yepamusoro. Zvese zvinhu zviri pawebhusaiti izvi mahara. Chinhu chinokosheswa, nekuti tese tinofarira mimhanzi yakanaka asi isu hatigone kuiwana nekubhadhara.
Webhusaiti yeVietnamese mavambo, iyo iine imwe yeakakura emimhanzi repertoires atinozowana pane internet muFLAC fomati. Chinhu chinonyanya kushamisa hapana mubvunzo kuti zvese zvirimo zviripachena uye hazvo zvine kushambadzira kunotsausa, saka kurodha pasi edu emaalbums ari nyore kwazvo. Imwe mukana webhusaiti ino ndewekuti haingotitenderi kumhando imwe chete, asi inotipa huru repertoire yesarudzo pakati pedu yatinayo: MP3, M4A uyezve mhando yepamusoro yeFLAC. Iyo repertoire yeayo katarogu ine rupo kwazvo uye iwe unogona kuwana mimhanzi kubva kumazera ese kana kunyangwe bhaisikopo nemavhidhiyo mutambo wemitambo.
Mumhanzi wekare waisagona kunge usipo pasarudzo iyi, imwe yemhando dzinonyanya kudiwa muFOMAC fomati. Nechishandiso chinowanikwa cheApple icho chinopa hombe katarogu yemhando yechinyakare mumhanzi. Tinogona kuwana ma symphony uye akazara maalbham pasina matambudziko. Nakidzwa nehukama hwehukama hwekushambadzira, pamwe neinjini yekutsvaga inobatsira iyo inokutendera kuti uongorore zvese zvingasarudzwa uye uwane zvatiri kutsvaga. Iyi papuratifomu inopa mazuva gumi nemana ekuyedzwa kwemahara kuti ushandise zvirimo, mushure menguva ino iwe unofanirwa kubhadhara kwegore rePremium kunyorera kwe14 eurosZvinogona kutaridzika kunge zvinodhura asi kana iwe uri mudiwa werudzi urwu rwemimhanzi, pasina mubvunzo unokodzera iwe peni pese yawakaisa mari.
Primephonic - Kutenderera Classical Music
Imwe yedzakanakisa sarudzo yevanoda emhando yepamusoro mimhanzi. Yakavanzika yepamhepo chikuva iyo inopa rakakura mimhanzi raibhurari. Kunyange Hazvina kungogumira kumimhanzi sezvo isu tichizowanawo vhidhiyo, mabhuku, software uye ma comics. Iyo poindi isina kunaka yeiri webhu portal iri pasina kupokana kuti haugone kupinda zvakasununguka, asi kuti inowanikwa kuburikidza nekukoka kunogamuchirwa kubva kumushandisi. Kunyangwe isu tine imwe sarudzo yakapusa uye ndiko kuti tinogona Kumbira kubvunzurudzwa maererano nenyaya dzine chekuita nemumhanziKana tikakunda, tinogona kusaina kuRedactec uye kurodha pasi peumhanzi.
Takasvika ku sarudzo yakanakisa kune avo vanonyanya kudomboira. Kubva pane ino webhusaiti tinogona kurodha pasi pekusingaperi kwemimhanzi yezvinyorwa muFLAC fomati yedombo genre. Iyo yemahara yemahara chikuva uye ine yakawanda nhamba maalbum, singles, makonzati uye zvimwe zvirimo muFLAC fomati. Zvese zvako zvinhu zviri pamaseva seMediaFire kana Mega, saka kurodha kuri nyore. Chinhu chakanakisa nezve ino portal ndechekuti zvirimo zviri zvemahara, saka tinogona kuwedzera muunganidzwa wedu nekusingaperi uye tisingatyi kuwedzerwa mari.
Vadivelu Comedy HDTracks
Mune ino kesi iyo webhusaiti yekubhadhara, asi pasina kupokana yeakanyanya kugadzikana uye anopa mubayiro. Pamusoro pekukwanisa kuwana mimhanzi kubva kuunganidzwa hombe, une mukana wekutsvaga ese marudzi emhando, chero fomati yatinoda. Iyo fomati yeFLAC ine huvepo hwakasimba saka mhando inovimbiswa. Sechimwe chinhu chekuwedzera chatisingakwanise kuwana mune zvimwe zvese, ino webhusaiti inotipa mukana wekushandisa zvirimo zvekushambadzira pasina chikonzero chekutora chero, kuti tikwanise kuteerera mumhanzi wacho zvakananga.
Webhusaiti inotipa imwe yeakanakisa maficha muFLAC fomati yeinternet yese yemahara. Pakati pezvinyorwa zvako tinowana anopfuura makumi maviri emimhanzi genres iine repertoire iyo inovandudzwa nguva nenguva. Ichowo chimwe cheaya mapeji ayo inozivikanwa nekuve nyore kuwana, zvinoreva kuti tichava nekuwana zvachose risingagumi kune yako zvinhu pasina kubhadhara imwechete €. Kuti uenderere mberi nekudhawunirodha chero dambarefu, chingotsvaga kuburikidza neinjini yako yekuvhura, vhura iyo uende kune yayo yekurodha link.
Imwe webhusaiti yakabhadharwa, iyo ine raibhurari hombe izere nemimhanzi kubva kune ese anozivikanwa marudzi. Inopa mukana wekuwana discographies mune fomati yatinoda. Kunyangwe izvo zvinotifadza zviri zvemukati zveFLAC uye mune iyi kesi kuvapo kwayo kwakakura. Sezvo parizvino iri iro rinodiwa zvakanyanya fomati nevose vanoda-mumhanzi vanoda-mhoro. Mune ino kesi isu tinowanawo yakawanda nhamba yechinyakare mimhanzi mimhanzi muFLAC fomati.. Haisi yemahara asi pasina kupokana tinofanirwa kutaura kuti hazvisi nyore kuwana chitoro chepamhepo chine mimhanzi mune ino yakasarudzika fomati, iri nyore kushandisa uye nekunakidzwa mashandiro. Kubhadhara kunogona kuve kwegore kana pamwedzi, saka tine zvivakwa kana tichibhadhara mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Maitiro ekurodha mhando yemhando yepamusoro yeFLAC yemahara
Tarisa GS Pro, Yekuremekedza yakanyanya "premium" wachi